काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले बैशाख ३ गतेदेखि उपभोक्ताको थप सुविधाको लागि नयाँ अफर ल्याएको छ । उक्त कम्पनीले ह्याप्पी सोसल मिडिया प्याक र विद्यार्थी अफर उपलब्ध गराउने भएको हो । कम्पनीका अनुसार वैशाख ३ गते मनाइने आमाको मुख हेर्ने दिन (मातातीर्थ औंसी) को अवसरमा नेपाल जीएसएम तथा सीडीएमएका प्रिपेड÷पोष्टपेड मोबाइलमा ‘ह्याप्पी सोसल मिडिया प्याक’ उपलब्ध गराइनेछ । यसलाई ह्याप्पी सोसल मिडिया प्याक अन्तर्गत फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप चलाउन सकिने छ ।
शिक्षकको नाममा कलंक: यी हुन ९ बर्षीय बालिका बलात्कार गर्ने शिक्षक !
कहाँनीरको कोठीले धनी र गरिबको संकेत गर्छ ? (१३ सत्य)
थाईल्याण्डको ९ विकेट गुम्दा खेल रोकियो , यस्तो छ अबको प्रक्रिया !
ह्याट्रिक लिन बाट चुके सन्दिप थाईल्याण्डको गुम्यो ६ विकेट, यस्तो छ ताजा स्थिति !